9 Easy Mgbe mmetụta Nkuzi na YouTube | Download
Mgbe mmetụta Nkuzi, amalite site Plugins
Iji ike pụtara videos / na fim ndị Mgbe mmetụta, ọrụ kwesịrị ịmụta iji dị iche iche plugins. Otú ọ dị, e nwere ndị ọzọ Atụmatụ na usoro n'ihi na ị na-enyere gị aka ịghọ onye video edezi pro dị ka dị iche iche visual mmetụta na dị iche iche mkpirisi na ọbụna ọzọ.
1 Mgbe mmetụta edezi Atụmatụ
1.1 Mee kinetic Typography Video Mgbe mmetụta
1.2 Mepụta Text Animation Na Mgbe mmetụta
1.3 Mepụta Nkpuchi Site Ọdịdị Mgbe mmetụta
1.4 Mee Animated Logo Mgbe mmetụta
1.5 3D Animation Mgbe mmetụta
1.6 Mee Intro Mgbe mmetụta
1.7 Mee Agwa Animation Mgbe mmetụta
1.8 Mepụta Motion Graphics Mgbe mmetụta
1.9-eji okwu Mgbe Emetụta
2 Mgbe mmetụta YouTube Tutorial
2.1 YouTube Mgbe mmetụta Tutorial
3 Mgbe mmetụta Uzo mkpirisi na Plugins
3.1 Mgbe mmetụta Uzo mkpirisi
3.2 Best Free Mgbe mmetụta Plugins
4 Mgbe mmetụta Alternatives
4.1 Mgbe Mmetụta Alternative
9 Easy Mgbe mmetụta Nkuzi na YouTube
Mgbe ndị mmadụ na-ekwu okwu banyere eke oké achọ visual mmetụta, ha nwere ike ikwu Adobe Mgbe mmetụta. Nke a bụ ụlọ ọrụ na-eduga dijitalụ ngagharị ndịna-emeputa software, karịsịa maka nkiri post-mmepụta. Ọ bụrụ na ị mụta Mgbe mmetụta, ị nwekwara ndị ọkachamara mgbe na-eme slideshows ma ọ bụ website intros.
E nwere ọbụna nkpoda mmụta usoro maka Mgbe mmetụta karịa Photoshop, otu software si Adobe. Ma na enyemaka nke Mgbe mmetụta video Nkuzi na YouTube, ị pụrụ ịmụta ya na gị onwe gị, na ọ bụ kpam kpam free. Ga na ị ka chọrọ na-emefu ego ịmụta Mgbe mmetụta?
Æ Tutorial Atụmatụ:
1. Iji Wondershare AllMyTube ibudata a niile usoro ihe omume offline playback.
2. naanị download Mgbe mmetụta nkuzi maka onye eji ya. Ị na-adịghị ekwe ka kesaa ya n'ụzọ ọ bụla, ma ọ bụ iji ya dị ka akụkụ nke gị video. Were gị onwe gị n'ihe ize ndụ iji ebudatara Mgbe mmetụta video si YouTube.
3. Gị YouTube.com n'ihi na ihe Mgbe mmetụta Nkuzi.
Na-atụ aro YouTube Downloader-Wondershare AllMyTube
Na-ekiri ndị Video
Download na tọghata YouYube videos na kacha ụzọ
• Download YouTube videos na listi ọkpụkpọ na batches
• Download YouTube elu bit-ọnụego MP3 ke kiet ke otu-click.
• tọghata ebudatara video karịrị 150 formats
• Download vidiyo si na ndị ọzọ 100 video saịtị gụnyere ezumike, FunnyorDie, Vimeo na ndị ọzọ
• Download videos 3X ngwa ngwa na ọrụ scheduler.
• Record ọ bụla video si online weebụsaịtị.
• Nyefee video ekwentị mkpanaaka na-enweghị eriri USB.
• Dị ka dị ka a video ọkpụkpọ na njikwa
1 Mgbe mmetụta Basics - Okwu Mmalite
Echiche: 670K +
Mgbe mmetụta version: CS4, CS3
Nke a na mgbe mmetụta nkuzi na-aga site nile bụ isi usoro mkpa ka ị mara ka malitere na usoro ihe omume. Firstly niile ọrụ mere na Mgbe mmetụta a na-echekwa na-".aep" ndọtị. (Mgbe mmetụta Project). Ọzọkwa atụle bụ usoro nke importing na exporting faịlụ na Mgbe mmetụta. Mmalite na toolbar panel nke a ga-mgbe mgbe na-eji mgbe na-arụ ọrụ dị iche iche na oru ngo. A mkpirikpi nnyocha ụfọdụ nke ọrụ nke a ole na ole nke ngwaọrụ emi odude ke mmanya. Atụle bụ otú footage haziri na oru ngo panel. Rearranging na resizing dị iche iche ogwe na mgbe mmetụta window maka mfe ojiji nke nwekwara agụnye zoro ezo na reappearing nke dị iche iche ogwe mgbe anaghị eji maka arụmọrụ.
2 Mgbe mmetụta Tutorial - Mepụta a mejupụtara
Echiche: 290K +
Nke a na mgbe mmetụta nkuzi na-aga n'elu-eke a dị mfe mejupụtara. Kwuru bụ otú tinye footage ka a mejupụtara. N'ịkọwa ụzọ abụọ na nke oge nwere ike gbanwee. Otu site na-adọkpụpụta nke ugbu a oge egosi tinyere usoro iheomume na ndị ọzọ na site na ịpị 'Gaa na oge' bọtịnụ na imputing oge ahụ kpọmkwem. A mkpirikpi nnyocha nke isi iyi faịlụ na ebe ha na-emi odude mgbe kwukwara na mejupụtara. Iji atụmatụ dị ka mbugharị na-eme ka ndị mejupụtara panel irè karị. A nkuzi na-egosikwa ole na ole keyboard mkpirisi nke ike-eji maka zooming na-eji na òké. Ndien ke akpatre, na-eji keyboard ka ịhazie oge etiti site etiti.
3 Mgbe mmetụta Tutorial - mejupụtara Panel
Echiche: 210K +
Nke a na mgbe mmetụta nkuzi na-elekwasị anya elu atụmatụ na mejupụtara panel. Ọ na-amalite anya na mma zones, na-akọwa ihe dị iche n'etiti edinam mma na aha isiokwu mma zones na otú Toggle ndị mma zones na ojiji nke keyboard mkpirisi ụzọ. Ọ na-egosi na ojiji nke okporo na mejupụtara na otú ọ na-enyere iji mee ka onye na-aga aga ihe ezi. Kọwakwara bụ isi ojiji nke onye na-achị. A nkuzi nwekwara ala ufodu nke ndabere agba dị mkpa iji na-agbanwe site nwa na otú na-aga banyere eme otú ahụ. Ẹkenam bụ toggle nghọta okporo, a atụmatụ na ọ bụ nakwa ugbu a na Adobe Photoshop nke toggles ndabere na agba site ya akpan akpan agba ka a uzo ndabere.
4 Mgbe mmetụta Tutorial - Basic Animation
Echiche: 410K +
Nke a na mgbe mmetụta nkuzi na-ekpuchi isi na-aga aga nke akpọkwa. The nkuzi ewebata dị iche iche keyboard mkpirisi nke ike-eji Iji biaghachi oge egosi ka mmalite. Ọ ewebata ndị keyframe atụmatụ Mgbe mmetụta, ihe ha na-eji & otú ha na-eji. Ọ na-aga site otú ịgbanwe ọnọdụ nke akpọkwa na a mejupụtara site na iji keyframes na n'ihu na, na-agbakwunye multiple keyframes ịgbanwe-aga aga. Ọzọkwa gosiri bụ ụzọ isi Toggle n'etiti ogologo edoghi na curvy edoghi na-aga aga. N'ikpeazụ, gosiri bụ otú ịgbanwe ụzọ ndị na-aga aga site shifting ama positioned keyframes.
5 Mgbe mmetụta Intermediate Tutorial site Zolaboy
Mgbe mmetụta version: CS5, CS4, CS3, CS2, CS
Nke a n'etiti Mgbe mmetụta nkuzi ngwa ngwa na-akụzi márá nkà nke ga-aka na-eke mma animations. Ọ na-ewebata masks ma owụt masking nke ihe nke pụtara kewara ndị ihe si ya ndabere. Gosikwara na ndị esi etinye iche iche na ntọala ka a nkpuchi nke na-agụnye feathering na nghọta tinyere akọwa ufodu nke atụmatụ ndị a ga-bara uru. The ojiji na atụmatụ nke dịgasị ogwe kọwara nke na-agụnye Ama, ọdịyo na preview ogwe. N'ikpeazụ pụta ìhè bụ otú eme ka ụzọ gị gburugburu gị ọrụ ebe nke ga-enyere ime ka ọrụ na-asọ nnọọ mfe na smoother.
6 5 Jụụ Intermediate Atụmatụ maka Mgbe mmetụta
Mgbe mmetụta version: CS3, CS2
Nke a na mgbe mmetụta nkuzi na-aga site ise n'etiti Atụmatụ na mgbe mmetụta. Ndị a Atụmatụ ga aka na ihe oru oma ọrụ eruba na melite àgwà nke animations. Mbụ n'ọnụ bụ atụmatụ ahụ 'na-mfe ala' nke na slows ala na-aga aga na isi ihe ụfọdụ na-eme ka na-aga aga yie ihe organic. Ndị ọzọ n'ọnụ bụ ojiji nke eserese nchịkọta akụkọ ime ka na-aga aga ọzọ organic ka mfe ala ma dị ka a otutu ihe ntọala iwu na. Iji ukporo tracker na adị ruo e kere eke nke ụzọ nke ihe na-aga aga nke na-enye ohere maka na-aga aga nwere ihe na organic eruba. N'ikpeazụ, na-eji plugin kwurịta ike egwu animations na ike nkịtị nsio.
7 Olee otú Mepụta a 3D Scene na Ìhè na Onyinyo
Mgbe mmetụta version: CS3
Nke a na mgbe mmetụta nkuzi egosi otú ike a 3D idaha na ìhè na onyinyo. Kọwara bụ ebe na nke i nwere ike inwe dị iche iche textures n'ihi na gị ndabere. Ọzọkwa kọwara na nke nkuzi bụ otú ibudata Akara ókwú na wụnye ha na Mgbe mmetụta nke bụkwa otu usoro maka ndị ọzọ Adobe software. Gosiri bụ otú iji dị iche iche ìhè na onyinyo usoro na-zuru okè 3D anya. Esi etinye ndị a ìhè na onyinyo ka ederede na-na-na n'ozuzu mejupụtara. Ọ na-ewe gị site na iji a igwefoto oyi akwa na-egosi otú iji dị iche iche nke igwefoto dị ka orbit ngwá ọrụ ịmepụta otu na-aga aga nke 3D idaha.
8 Mepụta 3D Video maka YouTube na Mgbe mmetụta
Nke a na mgbe mmetụta nkuzi egosi otú ike a pụtara dị mfe 3D ederede-aga aga. Ọ na-amalite na importing a ndabere na ederede mgbe ahụ na-eme ma atọ akụkụ. A igwefoto a na-ahụ kwukwara mgbe ahụ ntọala na-agbanwe na keyframes na-enịm iji izubandu ọnọdụ ahụ. Ikwọ na-duplicated na mgbanwe na-mere karị n'ihi na ma ekpe anya na anya aka nri ike a 3D ahụmahụ. Ndị a bụ nanị ihe ndị bụ isi dị mkpa iji ike a 3D video. Na-pụta ìhè bụ usoro nke na sụgharịrị 3D na-aga aga nwere ike uploaded si YouTube kee 3D ahụmahụ.
9 Mepụta Particle Orbusing Trapcode Akpan akpan na Optical flares
Mgbe mmetụta version: 7, CS3, CS4, CS5
Nke a zuru ezu Mgbe mmetụta nkuzi egosi otú ịmepụta otu Orb Particle Animation na ojiji nke abụọ plugins Optical flares na Trapcode Akpan akpan tinyere iji ole na ole okwu. Abụọ ọkụ na-kere mgbe ahụ na-achịkwa a null ihe. Ngosipụta a na-ahụ nyere na null ihe nke na-enye ohere random ije na adiana nke ìhè. The Trapcode Akpan akpan mmetụta a na-ahụ kwukwara na ìhè ike a ìhè nzọ ụkwụ. A ohere ụwa gburugburu ebe obibi na-ahụ kere iji otu plugin Trapcode Akpan akpan. Flares na-ahụ kwukwara si Optical flares mgbakwunye na iji otu nke ya presets. Na gburugburu ebe obibi na-ahụ kwukwara na ìhè ụzọ ụkwụ. Lens n'ego ụgbọ na-ahụ kwukwara na ìhè ịmepụta otu ịtụnanya-aga aga.
YouTube Movie Onye kere Tutorial
YouTube Okwu Tutorial
Nke a bụ isi nkuzi banyere Mgbe mmetụta, ọkachamara video edezi software. Otú ọ dị, ọ bụrụ na video edezi bụ ihe ọhụrụ nye gị, tụlee Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), nke bụ ike ma mfe na-eji ngwá ọrụ maka ọrụ dị malite si. Download free ikpe version n'okpuru.
Eziokwu nke YouTube Logo
YouTube XL Ọ dịghị Aba akwado? Gbalịa Mma Ụzọ Watch YouTube Videos on Vario
9 Easy InDesign Nkuzi na YouTube Ịmụta InDesign
Olee otú mbubata MKV ka Final Cut Pro on Mac (Yosemite gụnyere)
Olee otú iji tọghata Video ka iPhone
YouTube ka AVI: Olee otú iji tọghata YouTube ka AVI
Olee otú Download Videos si YouTube na Ọzọ nrụọrụ maka Mavericks
Olee otú iji tọghata DAT ka MP4, WMV, MOV (QuickTime)
YouTube Downloader-adịghị arụ ọrụ? Kpebiworo
Olee otú iji tọghata na Import VOB ka iTunes
AVI ka iTunes Ntụgharị: Olee mbubata AVI ka iTunes Library
WebM Ntụgharị: tọghata WebM ọ bụla Format na Anglịkan
Olee otú iji tọghata VOB ka QuickTime MOV na Mac OS X odum / Windows
> Resource> tọghata> 9 Easy Mgbe mmetụta Nkuzi na YouTube